PUBG Mobile Nwelite 1.3 Patch Notes | Gam akporosis
Nwelite ohuru nke 1.3 nke PUBG Mobile dị ugbu a, ndị a bụ akụkọ niile nke patch
PUBG Mobile na-akwadebe ịkwụsị Royale Pass 17. Na nke a, ha amalitela ọhụrụ update kwachie 1.3 nke agha royale, ma enwere ọtụtụ ozi na mmelite dị ugbu a.
Mmelite dị ugbu a site na Storelọ Ahịa Play na Ọ nwere ihe ruru 640 MB maka gam akporo ngwaọrụ. Nke a bụ ihe edeturu maka gị.
PUBG Mobile Update Patch 1.3 Changelog, Ihe Ọhụrụ, na Mmezi
Ọnọdụ narị rhythms (dịka nke March 9)
Ọtụtụ narị Rhythms abịarute Erangel, nnọkọ ahụ na-amalite na ememme egwu kọmputa. Music Armband na-enye ikike 3 pụrụ iche. Họrọ nkà nke kachasị gị mma, kwalite nkà ahụ site na ịnakọta cassettes gbasasịa ma chịkwaa agha ahụ site na enyemaka nke nkà gị. Họrọ Erangel na ihuenyo nhọrọ eserese iji nweta ụdị egwuregwu egwuregwu a.
Mgbaaka nke Guardian:
Ihe mgbochi egwu
Clown eji Aghọ Aghụghọ Ule Gameplay (Dị ka nke March 31)
Ndị ọchị ahụ abịarutela Ememe Ememe Ememe Ememe Anniversary ma na-ese ihe osise na ebe niile. Vehiclegbọala si ụlọ ahịa na-atọ ọchị etinyela na Erangel. Ndị na-egwu egwu nwere ike ịnakọta ihe ọchị ma gbanwere ha maka ihe dị ka ngwa ọgụ ọgụ na ihe ndị pụrụ iche dị na ụgbọ ala ahụ.
Ndị na-egwu egwu nwere ike ịnakọta ihe ọchị ma gbanwere ha maka ihe ndị a na-esote n'ime ụgbọ ala ahụ: ozi gbasara mpaghara egwuregwu na-esote, ikuku ikuku na-esote, na njupụta nke ndị iro gafee map.
Mgbidi graffiti mgbidi
A mgbidi nke graffiti egwu ga-apụta n'akụkụ Graffiti Square na Spawn Island na ọnọdụ Erangel mara mma. Ndị na-egwu egwu nwere ike ịgba agba na mgbidi Music Graffiti, na-ebute ndetu iji kpọọ mgbe agba agba na square. Ugboro anọ ọ bụla na-anọchi anya ihe ndekọ dị iche iche nke otu abụ olu ụtọ ahụ. Paintgba agba na ọtụtụ n'ámá iji rụọ ọrụ ọtụtụ ndetu.
Metro Royale: Kpughee (dị na Machị 9)
Kacha ọhụrụ isi
Metro Royale: Kpughee ga-adị mgbe emelitere egwuregwu.
Rewardsgwọ ọrụ ọhụrụ ahụ ga-adị na isi kachasị ọhụrụ.
Ndị iro ọzọ a ma ama ga-abịa na mberede n'ọgbọ agha.
Egwuregwu Metro Ọpụpụ ndị ehichapụrụ na égbè Tikhar, mere ka ndị iro mara ihe, ma mee mgbanwe maka nhazi otu.
Mgbanwe ndị ọzọ nke maapụ
Mgbe emelite nsụgharị ahụ, ọnọdụ Armor ga-adị na Fraịde, Satọde na Sọnde ọ bụla.
Firearm: Mosin-Nagant sini egbe:
Mosin-Nagant bụ egbe 7,62mm bolt-action sniper égbè dị ike dị ka Kar98K.
Agbanyeghị, mgbọ ha na-efe ngwa ngwa ma nwekwaa mbibi pere mpe. Nwere ike ịkụ onye iro na-ejighi ngwa agha otu egbe site ogologo oge.
Mosin-Nagant ga-apụta na Erangel na Vikendi, dochie ụfọdụ égbè Kar98K.
Gbọala - Motor Glider:
Enwere ike ịchọta ndị na-enye ike na Erangel na Miramar. Ha ga-apụta na enweghị usoro na eserese abụọ a.
The Motor Glider bụ ụgbọ ala mmadụ 2 nke nwere oche ihu maka onye ọkwọ ụgbọ ala na oche azụ nke onye njem nwere ike ịgbapụ.
Iji pụọ, onye na-anya ya aghaghi ịpị bọtịnụ ịrị elu iji bulie imi mgbe Motor Glider nwetere ọsọ ọsọ.
Ihe oriri nke Glider Engine na-emetụta ọsọ ọsọ nke engine. Ngwa ngwa ị na-efe, ka ị na-eri mmanụ karịa.
Basic arụmọrụ ndozi:
Ebumnuche ntụgharị asụsụ nke emelitere n'ọgụ maka ngwaọrụ ndị dị ala iji belata ọnwụ.
Nhọrọ dị mma na agha nke ihe mgbochi na-egbochi ihe maka ngwaọrụ ndị dị ala iji belata nsụgharị nsụgharị mgbe igwefoto na-agagharị.
Izugbe UI melite mgbagha na agha ka mma nke ukwuu iji belata oge UI melite.
Belata oge na - ebute mgbe onye ọkpụkpọ si n’elu ụgbọelu wụpụ.
General ọnwụ nhazi ọnwụ, dị ka elu igwe na oké osimiri, e belata ka egwuregwu na-agba ọsọ were were.
Edozi esemokwu nke mere ka egwuregwu ahụ daa mgbe enyere MSAA na HDR na ngwaọrụ iOS 14.3.
Meziwanye mwepụ nke akụ na ụba ndị a na-ejikarị eme ihe iji wepụta ohere karịa.
Edozi esemokwu ebe a ga-ebudatara ihe nbudata na nke ebudatara tupu enwee ike wepu ya.
Imeziwanye usoro ntụgharị vidiyo nyocha na ngosipụta nke ballistics na ugbo ala iji mee ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịme mkpebi.
Agbakwunyere ọtụtụ ihe ntanetị nke igwe iji chọpụta ma nyo omume enyo na egwuregwu.
Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-enyocha akwụkwọ nyocha akwụkwọ nọgidere na-abawanye iji hụ na nchekwa nke egwuregwu dị elu na asọmpi.
Ọ gara n'ihu na-ewusi nchebe egwu egwu megide mwakpo DDoS ma gbasaa mkpuchi nke usoro nchekwa iji hụ na arụmọrụ egwuregwu dị mma ma kwụsie ike.
Basic ahụmahụ ndozi:
Ntughari uche nke uche: Ndị egwuregwu nwere ike mepee UI nhọrọ iji mezie uche na ntọala ọzụzụ.
Zoo okpu agha na egwuregwu.
Mmelite ụda Mk14.
Igwefoto tilt ngwọta.
Ihe ngosi eserese.
Ndị ọzọ na usoro ndozi:
Ihe omuma ohuru ohuru: Gwuo XNUMX Rhythms na Erangel.
Mydị Echiche Mygha Ọhụrụ nke VI: Na-anakọta 300 Ejiji thgha.
Ọrụ njikwa ozi
Imirikiti ozi sistemụ ga-egosipụta na njikwa ozi. Ndị na-egwu egwu nwere ike iji njikwa ozi ahụ ozi sistemụ n'ụzọ doro anya n'otu nlele ma ọ bụ ka ha gaa nke ọma na peeji nke usoro ozi iji jikwaa ọkwa.
PUBG Egwu Egwu
Ntinye ntinye na njirimara a na oghere ọkpụkpọ.
Ndị na-egwu egwu nwere ike iji nke a iji gee egwu ma tọọ egwu dị n'okirikiri maka ohere ha.
PUBG Mobile enwetala ikike zuru oke nke egwu niile enwere ike ige ntị.
Ndị na-egwu egwu nwere ike inye ndị enyi ha onyinye onyinye ọba.
Freebies na ohere nweta nkwalite
A na-etinye ụfọdụ mmachibido inye ụfọdụ onyinye na oghere iji gbochie mmejọ a iji mee ka ewu ewu.
Ihe odide di omimi
Ihe ngosi graffiti ohuru emelitere nke nwere ihe nlere anya ma na-egwu egwu na nso nso.
Oge Royale Na-agafe Oge 18: AKW RKWỌ RHYTHMS (Ka ọnwa nke March 17)
A ga-enwe 2rd ncheta isiokwu music ihuenyo na ụgwọ ọrụ. Ndị na-egwu egwu nwere ike ịhọrọ ụgwọ ọrụ ọkwa ugboro abụọ ka ha na-aga n'ihu site na Royale Pass. Mgbe mmemme ncheta malitere, ụfọdụ ndị ọbịa pụrụ iche ga-apụta. Na mgbakwunye na njedebe AUG, ndị egwuregwu nwekwara ike ịhọrọ site na 1 dị elu na ọkwa 50 na ogo 100. Na ọkwa 98, nweta violin Music Set na ihe omimi KarXNUMXK!
Ihe omume dị egwu ga-amalite na egwu ahụ. Agbakwunye Kupọns Adventure na Free Rank Rewards, ndị egwuregwu nwere ike iji ha gbapụta 1 nke uwe 2 ugboro abụọ na ibe mmemme. Adventure na-echere.
Ihe omume RP Arụ Ọrụ malitere na oge ọhụrụ.
Dòziri chinchi ndị ọzọ na - emetụta ọrụ na ọdịnaya ndị ọzọ iji melite ahụmịhe ọkpụkpọ.
New Cheer Park Isiokwu: Ememme Ememe Ememe Ncheta Ememe Ncheta
Egwuregwu ebe ndị egwuregwu na-apụta na Cheer Park bụ ugbu a DJ electronic music plaza with a DJ stage, arcade music machine, and techno launcher. Mgbe ememme ncheta malitere, egwu DJ ọhụrụ, egwu ochie ochie, PUBG MOBILE isiokwu egwu, na egwu egwu BP electronic ga-egwu aghara aghara.
Melee ngwa agha gosipụta ọrụ
Ndị na-egwu egwu nwere ike ịhọrọ ugbu a iji gosipụta egbe egbe na ngwa ọgụ dị n'ọnụ ụlọ.
Ọ bụrụ na agbasoro ọnọdụ ndị a, egbe ahụ na ngwa ọgụ nke ndị egwuregwu na-egosipụta n'oghere ha nwere ike iji mee ihe na Spawn Island.
A ga-ewepụ egbe niile na ngwa ọgụ niile ndị egwuregwu nwere na Spawn Island mgbe ha banyere n'ụgbọelu.
Ọnọdụ iji weta ngwá agha site n'ọnụ ụlọ:
Ngwá agha: A ga-akwadebe ya na Akụkọ Ochie ma ọ bụ karịa, mana ọnọdụ a anaghị emetụta ngwa agha ndị na-adịghị ahụkebe enwere ike ịkwalite, enwere ike iweta.
Ngwongwo Melee: Kwesịrị idobe ya na Epic ma ọ bụ karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nwelite ohuru nke 1.3 nke PUBG Mobile dị ugbu a, ndị a bụ akụkọ niile nke patch
WhatsApp ga-enye gị ohere izipu ozi na-ebibi onwe gị n'ime awa 24